Banyere Anyị - Ningbo Hanor Textile Co., Ltd
na-asa ahụ Oge
eji ehi ura Oge
Hanor Textile dị na Ningbo China, tumadi na-Nlụpụta na mbupụ a dịgasị iche iche nke nwa textiles na home textiles. Anyị akwa ngwaahịa ahịrị na-agụnye nwa blanket, na nwa akwa nwa, nwa swaddle, nwa washcloth, nwa kpuchiri ihe n'ihu towel, nwa burp ákwà, nwa metụ akwa, nwa akwa mmiri na nwa uwe. Anyị na-ipuiche ajị anụ blanket, bath towel, osimiri towel, okenye akwa mmiri, kwushin, ohiri isi cover na bed sheeting.
Anyị kpụrụ ọma ahịa mmekọrịta na ahịa ma n'ụlọ na mba ọzọ. Na anyị ọgaranya mbupụ ahụmahụ, elu àgwà na ngwaahịa, asọmpi ahịa, elu ọrụ na na-na oge nnyefe, ọ dị mma na anyị nwere ike izute gị chọrọ ma gafere gị anya.
Anyị na-mgbe na-atụ anya na ịgbasa anyị ahịa isi. Ọ bụrụ na i nwere mmasị na ihe ọ bụla nke anyị usoro, biko kpọtụrụ anyị maka ozi ndị ọzọ. Gị afọ ojuju bụ ebumnuche nke mgbalị anyị, ọ bụla jụrụ ase ajụjụ ga-obiọma ntị ma na ozugbo reply na anyị elu arụmọrụ, ezi obi.
Ụlọ 1215, Haiguang Building, Nke 298, Zhongshan West Road, Ningbo, China.
Copyright 2018 Ningbo Yinzhou Hanor Textile Company Limited. Ikike niile echekwabara.